किन टाँगिन्छ ढोकामा कागती र खुर्सानी ? कारण यस्तो पो रहेछ !
हामी सबैले सुन्ने गरेको ३२ लक्षणले युक्ति युवती ! तर के-के पर्दछन त ति ३२ लक्षण भित्र ? जान्नुहोस तपाईकी कस्ती ?